Tirada qaxootigu ma gaarsiisna heerkii la saadaalinayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: ANDERS WIKLUND / SCANPIX
Tirada qaxootigu ma gaarsiisna heerkii la saadaalinayey
La daabacay måndag 8 april 2013 kl 09.32
Tirada soo-galootiga ee magan-gelyada dalka u yimid saddexdii bilood ee sannadka ugu horeeyey ayaa kor u kacey tiro u dhiganta saddex daloolow mid kolka loo barbar-dhigo bilahaa oo kale sannadkii tagay. Hase yeeshee tiradu ka hooseeyso middii la saadaalainayey oo ahayd iney aad kor ugu kacdo.
Saddexdii bilood ee sannadka ugu horeeyey ayey dalka soo galeen qaxooti gaarsiisan 9 737, waana kor u kac u dhigma 29%, haddii loo barbar-dhigo sannadkii tagay. Iyadoona haddii tiradu sidaa ku sii socoto la saadaalineyo iney sannadka oo dhan dalka magan-gelyo doon-nimo ku yimaadaan tiro gaarsiisan 39 000. Waana tiro aad uga hooseeysa saadaalintii hayadda socdaalku ey saadaalisay 54 000.
Mikael Ribbenvik, madaxa waaxda dardar-gelinta ee hayadda socdaalka, ayaa sheegay mar uu u warramayay hayadda wararka Iswiidhen ee TT in saadaalintii hayadda weli halkeedii laga aamin-san yahay. Hase yeeshee ey saameeyn middaa ku yeelan karaan sida ey u dhaqmaan hayadaha socdaalka ee waddammada Yuruboperativ chef på Migrationsverket, säger till TT att deras årsprognos ändå står fast. Waxaa tusaale ahaan aan weli kala caddeeyn maal-gelinta habkii ilaalinta xuduudda u dhexeeysa waddammada Turkiga iyo Giriigga, ahna xadka ugu shisheeya ee waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub.
- Xitaa haddii tiradu hooseeyso bilaha ugu horeeya ee sannadka wax ka bedeli meyno saadaalinta, sida uu sheegay Mikael Ribbenvik.